Ngwaọrụ Ọhụrụ magburu onwe ya maka Nwepụta Weebụ na UX na Linux | Site na Linux
Ngwaọrụ Ọhụrụ magburu onwe ya maka Nwepụta Weebụ na UX na Linux
Patrick Bustos | | Aplicaciones, GNU / Linux
Ruo nwa oge ugbu a, m lekwasịrị anya na imewe weebụ / UX, na eziokwu na-esiri m ike mgbe niile, ka m bụrụkwa onye ofufe Linux, n'ihi na enweghị ọtụtụ ngwaọrụ maka imewe weebụ ezi na n'ezie usable na anyị mmasị OS.
Ma oge gafere ma a na-anụ ekpere m nke nta nke nta, yabụ taa, m ga-ekwu maka ngwaọrụ ọhụrụ 3 (yana ụfọdụ ndị ọzọ) iji rụọ ọrụ n'ụzọ dị mma na sistemụ penguuin.
1 Ngwaọrụ maka imewe weebụ yana UX na Linux
1.1 Figma, nke kacha mma
1.2 GravitDesigner, nnukwu nhọrọ ọhụrụ na Inkscape
1.3 Vectr, nhọrọ ọzọ dị mma na ụdị ejiji.
1.4 Pixlr, naanị otu na ngalaba ihe oyiyi.
1.5 Ndị obodo a pụrụ ịtụkwasị obi.
Ngwaọrụ maka imewe weebụ yana UX na Linux
Figma, nke kacha mma
Ihe ngosi bu kpakpando ohuru na UX mbara igwe (ma gini kpatara okike nke vector), na onye ohuru ohuru ohuru nke Eke (ụkpụrụ ndabara). Ọ dị oke mma ma bụrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi nke na ejiri m ya maka ụfọdụ ọrụ m ma enwebeghị nkụda mmụọ. Uru kasịnụ ya bụ: ịbụ onye ọ bụla fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ihe osise nke Sketch na ike nke ịrụkọ ọrụ ọnụ, ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-emepụta nwere ike gbanwee otu faịlụ ahụ n'otu oge. O di nwute, enweghi ngwa ala maka Linux, ma ekewo m otu iji Electron, yabụ ị nwere ike iji ya na desktọọpụ kachasị amasị gị.
GravitDesigner, nnukwu nhọrọ ọhụrụ na Inkscape
Ngwaọrụ a dị ike n'ihi na vector imewe, enwela anyaụfụ ihe ọ bụla na- onye ihe ngosi ee Inkscape, ma ọ ka mma, n'ihi na ọ nwere ezigbo nụchara anụcha nke na-enye gị ohere ịmụta iji ya ngwa ngwa. Ọ bụ ihe na-atọ m ụtọ itinye aka m na ya, ọkachasị ebe ọ bụ na ọ gosipụtara na ọ bụ ntụkwasị obi nke ukwuu.
Vectr, nhọrọ ọzọ dị mma na ụdị ejiji.
Ngwaọrụ dị ukwuu, na nnukwu interface, ejiri m ya maka ọtụtụ atụmatụ m ma enwere m mmetụta, n'agbanyeghị na ọ dịghị mfe iji GravitDesigner. Uru nke a bụ na ọ bụ n'efu ma anaghị ahụ ya na ha ga-etinye ọnụ na ya opekata mpe n'afọ a. (dịka ọ dị n’ihe banyere mmadụ abụọ ahụ a kpọtụrụ n’elu). Usoro ya bụ SVG.
Pixlr, naanị otu na ngalaba ihe oyiyi.
O di nwute, o nweghi web ohuru ma obu ihe omuma Linux nke putara, ma Pixlr, bụ mmata ochie nke ga - eme ka anyị pụọ n'ọtụtụ nsogbu ma ọ bụrụ na anyị kwesịrị ịhazigharị onyonyo ma ọ bụ mee ngwa ngwa edetu foto, njirimara ya kachasị mma bụ na onye nwe ya bụ Autodesk (otu n'ime ụlọ ọrụ sọftụwia kachasị mma ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla) na ya abụọ Express ọrụ ụdịdị (nke a na-eji eme retouching na instagram ịke) na Editor, (nke dị ka Photoshop)
Ndị obodo a pụrụ ịtụkwasị obi.
N'ihe banyere ụmụ amaala, àgwà ya kacha mma bụ ntụkwasị obi. Ruo ọtụtụ afọ m ejirila ya Inkscape ma ọ dị obere ịhapụ m n'ụkwụ, ọ na-arụ ọrụ nke ọma mgbe niile, ma ejiri m ya nke ukwuu, na amaara m ihe m ga-arịọ ya na ihe na-agaghị. Ọ ga-adị n’obi m oge niile, karịa ihe niile, maka na ọ ga na-adị mgbe ọ bụla ndị ọzọ mejọrọ.
N'aka nke ọzọ GIMP itịbe
ihe yiri, ọ bụ ezie na ọ bụghị na obi m, karịa ihe ọ bụla, n'ihi na m mgbe niile a vector imewe na ọ bụghị foto retouching. Ọzọkwa, aghaghị m ikweta, enweghị m ike ịmụ iji aka ya na-arụ ọrụ nke ọma. (abughi foto)
Mmanya, onye nzoputa m. Ebe m nọrọ ọtụtụ afọ na-arụ ọrụ na ntanetị weebụ na UX, agara m jisie ike nwee ike ịrụ ọrụ na Linux n'agbanyeghị nsogbu niile. Ọ dabara, Mmanya Ọ na-anọ ebe ahụ iji nyere m aka inweta ngwaọrụ abụọ kachasị amasị m n'oge gara aga na-arụ ọrụ n'oge gara aga. Adobe Freehand na Adobe Fireworks. Ogologo oge, akụrụngwa ndị a (ọkachasị ọkụ ọkụ) bụ ndị nyeerela m aka bute achịcha na tebụl m, ọ bụ ya mere m ji nwee obere ebe ịchụàjà raara nye ha n’azụ ụlọ m.
Ọ bụ ezie na ngwa eji emepụta websaịtị akọwapụtara n’elu abụghị sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, ma ọ dịkarịa ala, ha bụ n'efu ma enwere ike iji ya amaala (nke bụ ihe achọrọ na Linux). N'aka nke ọzọ, echere m na iji ha nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka maka ndị na-ese ihe na-achọghị iji Mac ma ọ bụ Windows (dị ka ọ dị m).
Agbanyeghị, kelere Web / UX Designers ndị nwere ike mechaa rụọ ọrụ aka na sistemụ arụmọrụ nke ịhụnanya anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ngwaọrụ Ọhụrụ magburu onwe ya maka Nwepụta Weebụ na UX na Linux
Daalụ maka post. Ọ dị mma mgbe niile ịmara etu ndị ọzọ si eme ya.
Onwe m, m ga-achọ ịhụ nkwado Corel ka mma na Wine. Agbanyeghi na m ji Inkscape, mana enweghi m obi iru ala. Ana m anwale Gravit, ọ mara mma.
Ọbọgwụ na-achọ ịmata ịchọta onyinye gị ebe a, ezigbo fekicidades
Daalụ nke ukwuu Tito! Edeela m ọtụtụ ederede na ebe a, ị ga-ahụ ha, echere m na ha na-atọ ụtọ karịa nke a.
Zaghachi Patricio Bustos
M na-ajụ ihe m nwetara na mmemme ndị ahụ kwekọrọ na Corel, ozugbo m nwara inskape mana Corel emegheghị faịlụ ndị ahụ ...
Nnọọ! Inkscape nwere dị ka usoro ya .SVG (scalable vector graphics) na CorelDraw nwere ike ịrụ ọrụ ya nke ọma!
Ihe ị ga - eme bụ - na Corel - webata faịlụ .SVG ma site ebe ahụ, ị ​​nwere ike ịchekwa ya n'ụdị ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu, ị nwekwara ike ibupụ site na inkscape na usoro .EPS wee bubata ya site na Corel.
Ekele na ajụjụ ọ bụla ị nwere, mee ka m mara.
Echere m na ị na-echefu banyere Pencil Project!
Ọ dị mfe mana ọ dị ike. Ejirila ngwa ọrụ a mee ọtụtụ wayata na prototypes.
Ana m akwado ya ma ọ bụrụ na ị na-amalite ma ị nwere ike ịgafe na nke ọzọ nwere atụmatụ ndị ọzọ.
Ọ bụ oghe isi: https://github.com/evolus/pencil
Etu esi tinye Gmail na desktọọpụ Gnome
ScudCloud: A zuru okè Slack ahịa nke Linux